Ihe eji eme njem agha nke ndi Samsun Army High Speed ​​| RayHaber | raillynews
HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyA napụtara ndị ọrụ Samsun Army High Speed ​​Train Line Army
10 / 12 / 2019 52 Army, 55 Samsun, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey
samsun agha ngwa agha train train project project
A napụtara ndịagha Zamun Army Oke Speed ​​Lineer na Tender Tender; Lineun Train Speed ​​Speed ​​Samsun-Ordu, nke enyere oru ngo a karia izu gara aga, masiri Ordulular ya. Onye isi ala OTSO Servet Şahin kwuru na ha nwere obi ụtọ kemgbe ọtụtụ afọ. Onye isi oche ndị omeiwu OTSO Levent Yildirim kwuru, "waygbọ okporo ígwè ga-enyere aka na njem na njem nke ndị agha."
Nnyocha ụzọ ụgbọ oloko Samsun-Ordu, ihe eji enyere ndụ aka, nkwuputa ihe omimi, ihe elektrọniks, nyocha, injinia na ọrụ nkwuputa maka ọrụ ndị ọzọ, a na-akpọ ndị chọrọ ka ha nwee ahụmahụ zuru ezu itinye akwụkwọ maka prequalification. N'ime ndị ahụ kpebisiri ntozu ya dị ka nsonaazụ nyocha nke prequalification, a ga-edenye ha dị ka usoro ha siri dị na nkọwapụta prequalification ma ga-akpọkwa ha ka ha nyefee ndị nnọchi anya ya na ntinye nke ndị na-ebu iwu ahụ na ntinye nke ndị nrụtụ ọrụ ahụ na ntinye nke 4734 Iwu Nke 5. Tender 25 Na Disemba 2019, Purzụ Zuru Ezuzi TCDD na Controllọ Mkpokọta Njikwa Akụ (3.kat ụlọ 4052) ga-adị na 10.00.
AKW .KWỌ NKW FEKWỌ AKW WKWỌ AKW WKWỌ GA-EME
TCDD, Samsun-Çarşamba-Ünye-Fatsa-Ordu okporo ụzọ gbara agba ga-ewuru dị ka eriri nke abụọ na usoro EST'li ndị ọzọ na-arụ ọrụ (ọsọ ọrụ, ndị njem, ibu, ngwakọta agwakọta, wdg) iji nyochaa elele ọmụmụ nyocha ahụ. Site na nkọwapụta nka na ụzụ, na mgbakwunye na sistemụ njem dị adị na ụzọ Samsun-Çarşamba-Ünye-Fatsa-Ordu, na mgbakwunye na usoro njem dị ugbu a, nyocha nke akụkụ akụ na ụba na ego (Ego) nke iwu ofgbọ okporo ígwè; Ebumnuche ya bụ ikpebi nkọwapụta teknụzụ nke Ọmụmụ Ihe Mmezi, nke ga-agụnye nyocha akụ na ụba iji chọpụta ma ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ nyocha gbasara Ego iji chọpụta ma ọ ga-ekwe omume.
AHİN: BB TR T TỌỌTARA NA AKWADER.
Nkwuwapụta nke ndị dị nro bụkwa nnukwu ọ joyụ nye Ordulular. Servet Şahin, Onye isi oche nke dulọ Ọrụ Azụmaahịa na Ọrụ, Ordu kwuru na nrọ ọzọ nke ndị agha malitere imezu wee kwuo, “Nke mbụ, anyị ga-achọ ikele ndị niile nyere aka n'okwu a, ọkachasị Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan. Nke ahụ bụ ihe o kwesịrị ịdị. Railway Samsun-Sarp kwesịrị ịga n’ihu Ordu na Giresun. Anyị na-atụ anya na ike ịgagharị na ndụ azụmaahịa nke mpaghara anyị ga-enwetaghachi site na ụzọ ụgbọ oloko a Ndị mmadụ na-apụ site na Istanbul ma ọ bụ obodo ọzọ nwere ike isi ebe a gaa Beijing. Anyị na-ahụ ka etu ụzọ ụgbọ ala Kars si dị mma. Ọ laghachi azụ na Kars site na Ankara. Kedu ihe kpatara na enweghị ụdị agagharị a na mpaghara anyị? (Ihe omume agha)
Usoro nyocha nke ntanetị igwe na-azụ
Mgbagwoju anya nke ụlọ yiri nke ụgbọ okporo ígwè dị na Gaziemir
Kabataş Bağcılar Tram Line Project Consultancy Tender Firma
Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Line Project Consultancy Tender Firma
Njem nleta na Erzurum
Snowfall na-atọ ụtọ ndị na-eme njem nlekọta
Obodo ski ski Erciyes n'oge mmalite nke ntụrụndụ na-atọ ụtọ
Ilgaza na-eme njem nlegharị anya nke snow
Ankara-Istanbul Yht Flights Delirium
Ememme ezumike ezumike na-atọ ọchị
İZKARAY na ndị nwe ala obi ụtọ
Ndị njem TCDD na-enwe obi ụtọ si Germany gaa na Zonguldak Airport
Ngoro 51 nke ụzọ ụgbọ oloko na-eme ka obodo ahụ nwee obi ụtọ
Ahịa Ngwá Ọrụ Ndị ahia ahia
Istanbul Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metro Project Tender çık
Ụlọ Ordu nke Ahịa na Ụlọ Ọrụ
Samsun Ordu High Speed ​​Train Project Tender